ii-unicorn ze-sdet- kutheni kunzima kangaka ukuqesha iisethi?
Eyona Oomatshini Abazihambelayo Ii-Unicorn ze-SDET- Kutheni le nto kunzima kakhulu ukuqesha ii-SDET?
I-SDET, ekwabizwa ngokuba yiNjineli yoPhuculo lweSoftware kuvavanyo, yindima yomsebenzi kuvavanyo lweSoftware kunye noMgangatho woQinisekiso loMgangatho. Ixesha lalisetyenziswa kwasekuqaleni nguMicrosoft emva koko uGoogle enombono wokutshintsha umsebenzi oqhelekileyo kunye nokuphindaphinda umsebenzi wokuvavanya ngesandla.
Kule minyaka idlulileyo, iinkampani ezininzi ziyaqesha ii-SDETs njengoko iyindima ebaluleke kakhulu kwi-Agile nakwi-DevOps. Nangona kunjalo, ngumsebenzi onzima ukugcwalisa.
Itekhnoloji itshintsha ngokukhawuleza okukhulu kwaye abavavanyi kufuneka bafunde okuninzi ukuze bahlale phambili komdlalo.
Kwiposi yam yangaphambili, Ukuvavanywa kwiLizwe le-DevOps Ndacacisa indlela indima yomvavanyi etshintshe ngayo kule minyaka ilishumi idlulileyo, yiyo loo nto kudala ukunqongophala kwe vavanya ii-unicorn .
Esi sithuba sithetha ngendima ye-SDET kwaye kutheni ii-unicorn SDETs kunzima ukuzifumana.
Yenza ntoni i-SDET?
I-SDET ngumvavanyi wesoftware yobuchwephesha egxile ekuphuhliseni izikripthi zovavanyo oluzenzekelayo.
Ngokwesiqhelo, bayinxalenye yeqela le-agile kwaye basebenza kunye nabaphuhlisi ukunceda ngokuzenzekelayo i-Criteria yokwamkelwa kumabali abasebenzisi.
Kananjalo nokuthatha inxaxheba kwimisebenzi yesiqhelo ye-QA, banokubhala nantoni na kuvavanyo lokudibanisa oluzenzekelayo, iimvavanyo ze-API kunye / okanye iimvavanyo ezizenzekelayo ze-UI.
Ukongeza, ii-SDET zinokunceda ukuphonononga iimvavanyo zeyunithi ezibhalwe ngabaphuhlisi.
Kutheni zifuneka nje ii-SDET?
Kuyo yonke imveliso, kukho izinto ezingundoqo ekufuneka zisebenza kuko konke ukukhutshwa kwemveliso. Oku kuthetha ukuba kuyo yonke i-sprint, amanqaku amatsha kunye nokusebenza okukhoyo kufuneka kuvavanywe.
Uphuhliso lwe-Agile luhamba ngokukhawuleza. Ngama-sprints amafutshane, aqhelekileyo kwiiveki ezi-2 ubude, abavavanyi abanalo ixesha lokuvavanya yonke into ngesandla.
Xa abavavanyi kwiqela bengenazo izakhono ezifunekayo zokubhala iitsheki ezizenzekelayo, lonke uvavanyo kufuneka lwenziwe ngesandla.
Ekugqibeleni, uvavanyo luba yibhotile kuphuhliso kunye nokukhululwa kwesoftware kuba kuya kuthatha ixesha elide ukugqiba.
Ke ngoko, ukuqesha nokubeka ii-SDET kwiqela eligugileyo kunokunciphisa umthwalo ngokwenza iimvavanyo ezenziwa ngesandla kunye nemisebenzi emininzi.
Udliwanondlebe nokuQesha ii-SDET
Ke, kutheni kunzima kangaka ukufumana nokufumana ii-SDET ezilungileyo?
Kule minyaka idlulileyo, uninzi lwezinto ezibizwa ngokuba zii-SDET endithe ndenza udliwanondlebe nazo azinazo izakhono zobugcisa ezifunekayo okanye andinawo ukuqonda kweQA kunye nemigaqo yovavanyo.
Abasiqondi ngokupheleleyo esona sizathu siphambili sendima ye-SDET kwiqela. Uninzi luhlangana nengcinga yokuba konke ekufuneka bekwenzile kukuzenzekelayo iikhrayitheriya zokwamkelwa. Masicace gca, i-SDET ASIYINJineli ezisebenzelayo .
Ukuba nenqanaba elifanelekileyo lokuvavanya ukufaneleka kunye nezakhono zobugcisa yeyona nto iphambili.
I-SDET enkulu sisivavanyi sesoftware ngorhwebo, inomdla ngomgangatho wesoftware kwaye kwangaxeshanye i-tech-savvy kwaye inomxube olungileyo wezakhono zobugcisa.
Xa ndenza udliwanondlebe nee-SDETs, ndihlala ndikhangela Ingqondo yeQA kwaye Izakhono zobuGcisa.
Iprofayile ye-SDET-Abavavanyi abagcweleyo
Ijongeka njani iprofayile ye-SDET enkulu? Zeziphi izakhono ekufuneka zibe nazo ii-SDET?
Ngoku, abanye bethu bavile ngabaphuhlisi abagcweleyo, kodwa sinokuba nakho Abavavanyi abagcweleyo ?
Ngokoluvo lwam, i-SDET kufuneka ibenayo kungcono obu buchule kunye neempawu zilandelayo:
Inengqondo yomvavanyi, inomdla kwaye inokuthi ize nemeko zovavanyo ezinomdla
Unokuqonda okuqinisekileyo kwemigaqo yovavanyo kunye neendlela zokwenza
Uyazi ukuba lonke uvavanyo luyaphicotha kwindalo kwaye uyawuxabisa umahluko phakathi ukuvavanya nokujonga.
Unokufaka iindlela ezifanelekileyo zovavanyo kwimeko enikiweyo
uyawazi umahluko phakathi kovavanyo kunye ne-QA
Uyayiqonda I-HTTP kwaye zakhiwa njani ii-web web zangoku
Ungabhala i-UI njengo Uvavanyo oluzenzekelayo lwe-API. Enye okanye enye ayonelanga!
Uyazi I-Git, iZicelo zoTsalo, isebe , njl.
Ngaba i-agile kwindalo kwaye iyazi ukuba uvavanyo lungena njani kwimodeli ye-agile
Ungabhala izikripthi zovavanyo lwentsebenzo ( Ukudibana kunye / okanye JMeter )
Ucinga ngokhuseleko kwaye uyazi I-OWASP
Uyayiqonda iCI / iCD kunye nokwakha imibhobho
Uyazi iinkonzo ezinikezelwa ngababoneleli beqonga lefu njenge-AWS, Azure kunye neGoogle Cloud
Ukuba yi-SDET enkulu
Njengoko kunokubonwa, uluhlu lwezakhono ezilindelweyo kwi-SDET lubanzi kakhulu.
Ingcebiso yam kubavavanyi abafuna ukuba zii-SDETs kwaye bahlale befanelekileyo kwiminyaka emitsha ye-QA yile:
Qinisekisa ukuba usebenzela ekubeni nazo zonke ezi zakhono zingasentla kwiprofayile ye-SDET_, kodwa ubuncinci: _
Yazi kwaye uqonde iziseko zovavanyo
Okokuqala nokuphambili, yazi iziseko zovavanyo lwesoftware.
Kulungile ukuba ulingane nabaphuhlisi kwaye ukwazi ukubhala ikhowudi entle. Kodwa ukuba uswele i-QA mindset, ukuba awukwazi ukuza neemeko ezaneleyo zokuvavanya amabali omsebenzisi kunye neempawu kubunzulu, emva koko awongezi naliphi na ixabiso. Unokusebenza nzima kwaye ube ngumphuhlisi.
Yazi kwaye uqonde i-HTTP
Uninzi lwezicelo zewebhu zangoku zinxibelelana neeAPIs.
Kubalulekile ukwazi nokuqonda uyilo lwe-HTTP kunye nendlela esebenza ngayo iwebhu. Ukuba awukwazi ukwahlula phakathi kwesicelo se-POST kunye nesicelo se-GET okanye ungazi ukuba wenze njani ucazulule iJSON , ungayivavanya njani ngokufanelekileyo i-API?
Gcina ixesha ekufundeni izixhobo zovavanyo lwe-API ezinje nge IKarati .
Awunakho ukuzibiza ngokuba yi-SDET ukuba yonke into ofuna ukuyenza kukuvavanya iimvavanyo kwaye into oyaziyo yiJava, iSelenium neCucumber!
Ixabiso le-galaxy z 2 ixabiso
Intsha entsha eyi- $ 199 yeNvidia Shield yeCwecwe K1 yithebhulethi efikelelekayo yokusebenza kwe-Android kubadlala umdlalo
I-Samsung Galaxy S20 kunye ne-Apple iPhone 11 Pro
I-Apple iPad Pro 12.9 (2021) vs iPad Pro 11 (2021)